၂၀၁၈ ရဲ့ Fashion ကိုဝင်ရောက်လာနိုင်သော အရောင် – FemaleWear.net
ဒီနှစ်အတွက် Fashion color တွေထဲမှာ ခေတ်စားလာနိုင်တဲ့ အရောင်တစ်မျိုးကတော့ ပန်းရောင်လည်း ပါဝင်လာနိုင်ပါတယ်။ Gal Gadot ရဲ့ Pink Fashion ကြောင့် လူတွေသတိထားမိလာတဲ့ အရောင်တစ်မျိုးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ Palm Springs International Film Festival ရဲ့ Red carpet ကို Pink Fashion နဲ့တက်ရောက်လာတာဖြစ်ပြီး အားလုံးရဲ့အမြင်မှာ Wonder Woman ရဲ့ Pink Fashion ကတော်တော်လေးကို ထူးခြားသွားခဲ့ပါတယ်။ hot pink ကိုဝတ်ဆင်ထားပြီး Nude color heeled sandal နဲ့ တွဲဖက်ဝတ်ဆင်ထားပါတယ်။ အောက်ခံအင်္ကျီအရောင်နဲ့ အရောင်တူ lipstick ကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ လှပအောင်ဆိုးထားပါတယ်။ သူမကတော့ ဘာလေးဝတ်ဝတ်သိပ်လှပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ သူမရဲ့အလှက အားလုံးကို ဖမ်းစားထားပါတယ်။ ဒါဆိုသူမရဲ့ Pink Fashion နဲ့ brand ကို ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
ဒီဝတ်စုံကတော့ Oscar De La Renta Spring 2018 ဖြစ်ပါတယ်။ စျေးနှုန်းကိုတော့ ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသေးပါဘူးနော်။ သူတို့ရဲ့ official website မှာလည်း ဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။
My dear friend Sivan is working onabeautiful foundation supporting an incredible cause. Sivan wasamother of precious and sweet girl named Ranni. The universe wasn’t fair and Ranni hadarare genetic metabolic disease and died at an extremely young age. I will never forget her and forever she’ll be in my heart. Ranni’s Wish bracelet was designed by Agas & Tamar and created with love for Ranni’s Wish foundation. This foundation was established in memory of Ranni Fisher and is dedicated to help children whom are suffering from genetic metabolic diseases. The bracelet is made withared cotton string that hasasmall balloon attached filled with inspiration, memory, hope and future. All the proceeds from the bracelets will be contributed to Ranni’s Wish foundation to assist in establishingagenetic metabolic center at the Dana-Dwek Children’s hospital. ? #ranniswish #4ranni #הצמידשלרני
Gal is at the Variety’s Creative Impact Awards and 10 Directors to Watch brunch to honor Patty Jenks. ❤
A post shared by @ galgadot_updates on Jan 3, 2018 at 1:08pm PST
Tags: Gal Gadot, Pink Fashion